Inona no tsapan'izao tontolo izao? Mandraisa anjara amin'ny fianarana momba ny fahasalamana ara-tsaina | Vaovao IPhone
Alejandro Cabrera | | Fampiharana iPhone, iOS
Tetikasa antsoina hoe «Manao ahoana izao tontolo izao?«, Tanjona ny hampiasa fampiharana ho an'ny iOS sy Android mitarika fandinihana lehibe indrindra manerantany momba ny fahasalamana ara-tsaina mandritra ny herinandro iray manomboka ny 10 Oktobra. Ny tanjona dia manangona angona avy amin'ny olon-tsotra hamantarana ireo lamina ara-tsaina Miaraka amin'ny fihetsem-po dia natao hanomezana data tsy fantatra anarana ho an'ireo matihanina momba ny fahasalamana ara-tsaina mba hiezaka hamorona fomba hampihenana ny tahan'ny famonoan-tena manerantany.
Ny fampiharana dia natao haharitra segondra vitsy monja hampiasana., mangataka amin'ny olona hisafidy fihetsem-po, avy eo misafidy hoe hatraiza ny fahatsapana izany fihetseham-po izany, ary hamita teboka data roa hafa, ny zavatra ataonao ary raha irery ianao na miaraka amin'ireo hafa manodidina anao.
Ho tombontsoan'ny mpampiasa, afaka mahazo rakitsoratra momba ny angon-drakitrao manokana ianao, mba ho hitan'izy ireo izay mahasambatra anao indrindra.
Raha toa ka mamantatra ireo lamina ao am-ponao manokana izay mety mila resahana ny fampiharana dia hampahafantarina anao ireo fitaovana sy loharano mety mahasoa anao.
Inona no tsapan'izao tontolo izao? Ny fanadihadiana ara-pahasalamana demokratika lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny tanjona hanangonana fihetsem-po mihoatra ny 70 tapitrisa. Ny fidirana amina tahiry angona iraisam-pirenena lehibe dia midika hoe fahatakarana tsy mbola nisy toa azy momba ny fahasalamana ara-tsaina manerana ny faritra demografika sy jeografika be dia be. Ny loharanom-baovao rehetra dia ho loharano misokatra tanteraka, izay midika fa misy olona na fikambanana na orinasa na orinasa afaka mampiasa ilay fampahalalana nangonina. Marihina fa tsy misy fampahalalana azo fantarina manokana angonina avy amin'ireo mpandray anjara rehetra.
Ny mpiara-manorina ny tetikasa, Lee Crockford, dia nilaza fa na dia mahazo aretina bebe kokoa aza ny aretina ara-batana noho ny aretina ara-tsaina, mamono tena dia mpamono olona mangina.
Raha ny filazan'ny Fikambanana Amerikanina miaro ny famonoan-tena dia misy mihoatra ny 42.000 ny famonoan-tena any Etazonia isan-taona. Sahabo ho 117 ny olona iray isan'andro, miaraka amin'ny 70% amin'ireo famonoan-tena ireo ataon'ny lehilahy.
Maimaimpoana ny fampiharana, mifanaraka amin'ny iOS 8.3 na avo kokoa ary manohana ny teny Espaniôla.
Manao ahoana ny fahatsapan'izao tontolo izao?maimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Inona no tsapan'izao tontolo izao? Mandraisa anjara amin'ny fanadihadiana lehibe indrindra momba ny fahasalamana ara-tsaina
Fiovana maro sy ho avy mamiratra: dimy taona aorian'ny Asa
Apple dia mbola orinasa sarobidy indrindra manerantany